Nnukwu mma maka Ryanair, Wizz Air, EasyJet, ntaramahụhụ Volotea nke ndị njem na ụmụaka nwere nkwarụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ Italy » Nnukwu mma maka Ryanair, Wizz Air, EasyJet, ntaramahụhụ Volotea nke ndị njem na ụmụaka nwere nkwarụ
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akwụkwọ akụkọ Italy • News • Tourism • Transportation • Akụkọ dị iche iche
Njikwa ụgbọ elu dara
Mgbe ha nyesịrị ntaramahụhụ euro 35,000 na Ryanair, Wizz Air, easyJet, na Volotea, ndị ụgbọ elu ndị a ga-anọgide na-ele anya mgbe niile nke Italian Civil Aviation Authority (ENAC).
Dabere na ENAC, ụgbọ elu ndị a dị ọnụ ala na-aga n'ihu na-akwụ ndị na-eso ụmụaka ma ọ bụ ndị nwere nkwarụ njem.
Usoro ihe mberede malitere na August 15, 2021, na -egbochi ụgwọ mgbakwunye maka oche ịnọkọ ọnụ.
EasyJet azaghachila ozugbo na -ekwu na ebubo na ntaramahụhụ enweghị isi.
Ụgbọ elu ụgbọ ala dị ọnụ ala, dị ka ENAC si kwuo, ikpe “na-aga n'ihu na-akwụ ụgwọ maka mgbakwunye oche maka ndị na-elekọta ụmụaka na ndị nwere nkwarụ.”
"Site na nyocha mbụ emere," ENAC kwuru, ụlọ ọrụ ndị a “emebiela: ha emebeghị, dị ka onye ọka ikpe nyere iwu ma kwenye, gbanwere IT na sistemụ arụmọrụ, na oge ntinye akwụkwọ, ha na -aga n'ihu na -arịọ mgbakwunye maka ọnụ ahịa tiketi ụgbọ elu maka. ekenye oche dị nso na ndị na -elekọta ụmụaka na ndị nwere nkwarụ, ewezuga, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, nkwụghachi ụgwọ. ”
Maka nke a, ndị ikike “amalitela usoro ịmanye mmachi” megide ndị na -ebu 3. Iwu ahụ-dị ka Corriere della Sera si kọọ-ga-abụ "nke na-emezughị" yana "nwere ike site na opekata mpe nke euro 10,000 ruo kacha 50,000 maka esemokwu ọ bụla."
Mkpuchi oche n'efu maka ụmụaka na ndị nwere obere ngagharị nso ndị mụrụ ha na/ma ọ bụ ndị nlekọta na -ekwe nkwa site na usoro mberede nke ENAC wepụtara ma na -arụ ọrụ kemgbe Ọgọst 15, 2021.
EasyJet ozugbo zaghachiri site na nkwupụta, na -ekwusi ike "na ọ na -eme ihe kwekọrọ n'ụkpụrụ ndị dị n'ike nakwa na mbido usoro iji weta mmachi ahụ enweghị isi."
Ụlọ ọrụ ahụ, ọ na -echeta, "na -ekenyekọ oche maka ezinụlọ ọnụ, nke pụtara na ụmụaka na -erubeghị afọ 12 na ndị nwere ngagharị ngagharị na -anọ n'akụkụ onye okenye so ha na -akwụghị ụgwọ ọ bụla."
Ndị ọchịchị machibidoro iwepụ ụgwọ maka ndị njem a na Julaị 17, 2021. Mgbe ahụ, TAR yigharịrị ịbanye n'ike ahụ ruo mgbe Ọgọst 15 gachara. obere ma ọ bụ onye nwere nkwarụ na -eso ha ka na -akwụ ụgwọ maka mmeju.